Duqaymo Alshabaab Lagula Beegsaday Gobolka Gedo – Radio Daljir
Duqaymo Alshabaab Lagula Beegsaday Gobolka Gedo
Luulyo 29, 2017 8:33 b 2
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka Kenya duqeymo xoogan ku garaaceen deegaano kuyaala duleedka magaalada Garbaahrey .
Deegaanada la duqeeyay ayaa la sheegay in ay joogaan dagaalyahanada Al Shabaab, waxaana masuuliyiin katirsan maamulka Gedo sheegeen in la duqeeyay saldhigyo Al Shabaab lahaayeen uuna khasaaro kasoo gaaray.
Duqeynta xoogeeda ayaa ka dhacday deegaanka Kulbis ee duleedka magaalada Garbahaarey, dadka deegaaanka ayaana sheegay in ay maqalayeen guuxa diyaarado dagaal iyo dhoor gantaal oo ku dhacay qeybo kamid ah deegaankaasi.
Wali si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntan ka dhacday gobolka Gedo, Kooxda Al Shabaab oo la sheegay in saldhigyo ay leeyihiin deegaanada la duqeeyay ayaan wali ka hadlin duqeyntan cusub iyo hadii uu khasaaro kasoo gaaray.
Diyaaradaha dagaalka dalka Kenya ayaa marar badan duqeymo khasaaro uu kasoo gaaray dad shacab ah iyo xoolo badan waxa ay ka geesteen deegaano kuyaala gobolka Gedo, mana jirto cid kala xisaabtanta Kenya dhibaatada mararka qaar dadka shacabka ah kasoo gaarta duqeymaha ay geestaan.
Qarax Maanta Kadhacay Magaalada Muqdisho
MAANHADAL: Taariikhda Puntland iyo Tabashada Beeshada Tanade (dhegayso)
faadumo 11 months
Waa in Dawladu badbaadisaa shacabkeeda waxna uqabataa insha laah
Waa in wax laga qabtaa